I-LibreOffice: Isingeniso Se-Main User Interface - Isifundo 1 | Kusuka ku-Linux
Ukufaka kwe-Linux Post | 15/05/2022 06:00 | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Lapho sishicilela ulwazi mayelana Ukusabalalisa kanye nezicelo, sivamise ukubhekana nezindaba zakho noma izehlakalo zobuchwepheshe. Asizange sigxile ekusetshenzisweni kwansuku zonke njengabasebenzisi bazo, ngoba lokho kungaba yinto ebanzi futhi eyinkimbinkimbi. Ngokuvamile, sikhuluma nawe landa bese ufaka ngendlela enemininingwane nezobuchwepheshe. Nokho, sikholelwa ukuthi esetshenziswa kakhulu futhi owaziwa Ihhovisi lamahhala nelivuliwe ku-GNU/Linuxucingo LibreOffice, idinga ulwazi olukhethekile mayelana nokuthi injani ngempela ngaphakathi ezinguqulweni zayo ezintsha nokuthi isetshenziswa kanjani emisebenzini yansuku zonke.
Ngalesi sizathu, lesi sifundo sokuqala nezinye eziningi ezilandelayo zizohlose ukukumboza lokho igebe elikhulu lamadokhumentari mayelana ingaphakathi le-office suite, ochungechungeni lwayo lwesimanje (7.X) okuzohanjwa ngalo "Ukwazi i-LibreOffice" kakhulu futhi kangcono.
Futhi njengenjwayelo, ngaphambi kokungena ngokugcwele esihlokweni sanamuhla esizinikezele ekuhambeni "Ukwazi i-LibreOffice", sizoshiyela labo abathakazelayo izixhumanisi ezilandelayo zezincwadi ezihlobene zangaphambilini. Ngendlela yokuthi bangazihlola kalula, uma kunesidingo, ngemva kokuqeda ukufunda le ncwadi:
"ISIQEPHUI-LibreOffice Office Suite iyisofthiwe ekhuthazwayo, yathuthukiswa futhi yasetshenziswa kakhulu Umphakathi Wesofthiwe Yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU/Linux. Ngaphezu kwalokho, kuwuhlelo lwenhlangano engenzi nzuzo ebizwa ngokuthi: I-Document Foundation. Futhi isakazwa mahhala kumafomethi angu-2, ahambisana nenguqulo yayo ezinzile (esekhona igatsha) kanye nenguqulo yayo yokuthuthuka (igatsha elisha), ngokusebenzisa amaphakheji wokufaka we-multiplatform (iWindows, macOS kanye ne-GNU/Linux) ngokusekelwa okubanzi kwezilimi eziningi (izilimi). )". I-LibreOffice Office Suite: Kancane kancane kwakho konke ukufunda kabanzi ngakho
1 Ukwazi i-LibreOffice: Izifundo zokusetshenziswa
1.1 Ukwazi isixhumi esibonakalayo sokuqala esamukelekile
1.1.1 Ibha Yemenyu: Izinketho
1.1.2 Ibha eseceleni: Izinketho
1.2 Ukusekela nokusebenzisana ne-LibreOffice
Ukwazi i-LibreOffice: Izifundo zokusetshenziswa
Lezi zifundo ezincane zinenhloso, i chaza ngendlela elula neyinkimbinkimbi izici ezithile, izici kanye nokusebenza kwe LibreOffice. Ngendlela yokuthi izingane, abadala kanye nabantu abadala balazi kangcono futhi bagqugquzeleke ukufunda ngayo, futhi bayinikeze inani elikhulu elikufanelekelayo njengenhloko eyinhloko. I-GNU/Linux Office Suite yamahhala futhi evulekile.
Ukwazi isixhumi esibonakalayo sokuqala esamukelekile
Lapho usebenzisa i I-FreeOffice Office Suite yamanje (uchungechunge 7.X) the isikrini sokuqala (i-interface eyamukelekayo) okuvelayo okulandelayo:
Futhi iqukethe izinketho ezilandelayo zokusebenzisa:
Ibha Yemenyu: Izinketho
Ibha eseceleni: Izinketho
Vula ifayela: Ukusesha nokuvula ifayela lehhovisi lendawo, okungukuthi, ngaphakathi kwekhompyutha.
Amafayela Akude: Ukusesha nokuvula ifayela lehhovisi elikude, okungukuthi, ngaphandle kwekhompyutha. Lokhu kuhlanganisa ukucushwa koxhumo olukude olushiwo, okungaba yizinhlobo ezilandelayo: Google Drayivu, OneDrive, Alfresco 4/5, IBM FileNet P8, IBM Connections Cloud, Lotus Quickr Domino, Nuxeo 5.4, OpenDataSpace, OpenText ELS 10.2.0 , I-SharePoint 2010, i-SharePoint 2013, Enye Isevisi ye-CMIS, i-WebDAV, i-FTP, i-SSH ne-Samba.
Imibhalo yakamuva: Bona uhlu lwamadokhumenti okugcina avuliwe.
Izifanekiso: Ukuze uvule futhi usebenzise izifanekiso zoMlobi, Impress, Calc kanye ne-Draw kuphela, noma uphathe (ukuhambisa, ukungenisa nokuthekelisa) konke ndawonye.
Umbhalo Wombhali: Ukuqala idokhumenti entsha yombhalo, isitayela se-MS Word.
incwadi ye-calc: Ukuqala isipredishithi esisha, isitayela se-MS Excel.
Isethulo se-Impress: Ukuze ukhiqize ishidi lomklamo omusha wesithombe, isitayela se-MS PowerPoint.
dweba umdwebo: Ukuze uqale umdwebo omusha noma isakhiwo, umshicileli we-MS kanye nesitayela se-MS Visio.
ifomula yezibalo: Ukwakha ishidi eliguqulelwe ekubhalweni kwamafomula ezibalo.
Isizindalwazi esiyisisekelo: Ukukhiqiza Isizindalwazi (BD), ngesitayela Sokufinyelela.
Inkinobho yosizo: Ukuvula usizo lwe-inthanethi (I-inthanethi) ye-LibreOffice.
Inkinobho Yezandiso: Ukuvula isitolo se-inthanethi Sezandiso.
Ukusekela nokusebenzisana ne-LibreOffice
"Imihlahlandlela esemthethweni ye-LibreOffice ihlanganiswa ithimba lamavolontiya. Ngaphandle kweqiniso lokuthi umphakathi okhuluma iSpanishi ungomunye wemikhulu kakhulu emhlabeni futhi ungomunye wabakhona kakhulu ku-inthanethi, ithimba lamavolontiya alungiselela imibhalo ngeSpanishi ye-LibreOffice ingelinye lamalungu ambalwa kakhulu ngaphakathi kwe-LibreOffice. umphakathi. Uma lokhu kungasebenzi kuwe, joyina ithimba le-LibreOffice". Kungani ungekho umhlahlandlela wesimanje we-LibreOffice?
Ngamafuphi, hamba "Ukwazi i-LibreOffice" kancane kancane nalezi izifundo ezincane, ngokuqinisekile zizokwenza eziningi, zombili mayelana I-GNU / Linux, njengabanye Izinhlelo zokusebenza, uzizwe ukhuthazeka kakhulu ukuba ufunde, uhlole futhi usebenzise ngendlela engcono kakhulu eshiwo Multi-platform office suite. Njengoba, nakuba kunolwazi oluningi olusemthethweni ngakho, ngokuvamile, alihlotshaniswa nezinguqulo zesimanje kakhulu. Ngakho-ke, lokhu okuqukethwe ngokuqinisekile kuzoba umphelelisi omuhle walokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukwazi i-LibreOffice: Isingeniso ku-User Interface enkulu
I-OpenMediaVault: Inguqulo entsha yesi-6 ye-Distro yokudala amaseva e-NAS